Uvuyo lwabesetyhini bamaSilamsi ngoNonie Darwish - Legends Legends
Inqaku eliphambili elibhekiselele kwi-Jewish born-Christian converter nguNonie Darwish uxwayisa ukuba ama-Islamist amaninzi agxininise ukutshabalalisa impucuko yentshona ngokumisela umthetho we-Sharia kwihlabathi lonke.
Inkcazo: I- imeyile eyithunyelweyo
Ukujikeleza ukususela ngo- Oktobha 2009
Isimo: Isalathisi esingalunganga (jonga iinkcukacha ezingezantsi)
I-imeyile yombhalo enegalelo lika-Adrienne C., uNovemba 28, 2009:
Kwikholo yamaSilamsi indoda yamaSulumane inokutshata umntwana njengomntwana oneminyaka eli-1 ubudala kwaye ibe nobuhlobo besondo kunye nalo mntwana. Ukusebenzisa umtshato ngo-9.
Idayini inikwe intsapho ngokutshintshiselwa ngumfazi (oba yikhoboka lakhe) kunye nokuthengwa kwamalungu angasese alo mfazi, ukuba amsebenzise njengemidlalo yokudlala.
Nangona umfazi ephathwa kakubi, akakwazi ukufumana umtshato.
Ukubonisa ubudlwengulo, umfazi kufuneka abe (4) amangqina abesilisa.
Ngokuphindaphindiweyo emva kokuba udlwenguliwe umfazi, ubuyisela kwintsapho yakhe kwaye intsapho mayibuyisele. Intsapho inelungelo lokuyiqhuba (inhlonipho yokubulala) ukubuyisela imbeko yentsapho. Amadoda angabetha abafazi 'ngentando' kwaye akadingeki ukuba athethe isizathu sokuba ambethe.
Umyeni uvunyelwe ukuba abe (abafazi abane) kunye nomfazi wesikhashana ngeyure (ihenyukazi) ngokuqonda kwakhe.
Umthetho wamaSulumane ulawula umgangatho wabucala kunye nobomi boluntu bomfazi.
Ehlabathini laseNtshona (iMelika) amaSilamsi aqala ukufuna uMthetho we-Shariah ukuze umfazi akakwazi ukufumana umtshato kwaye unokukwazi ukulawula ngokupheleleyo. Kuyamangalisa kwaye kusangalisa ukuba baninzi oodadewethu kunye neentombi eziya kwiiYunivesithi zaseMerika ziza kutshata namadoda aseMuslim kwaye zizithoba kunye nabantwana babo ngokungaqinisekanga umthetho weSharia.
Ngokudlulisela oku, ama-American abakhanyiswayo angakuphepha ukuba abe khoboka phantsi koMthetho woSharia.
Ukunyuka kweNtshona kwiZibini.
Umbhali kunye nomfundisi uNonie Darwish uthi injongo yamaSilamsi amaninzi kukunyanzelisa umthetho we-Shariah kwihlabathi, ukukrazula umthetho weNtshona kunye nenkululeko ebabini.
Usanda kubhala le ncwadi, i-Cruel and Usual Punishment: I-Impact Global Implications yoMthetho wamaSilam.
UDarwish wazalelwa eKairo waza wasebenzisa ubuntana bakhe eYiputa naseGaza ngaphambi kokufudukela eMelika ngo-1978, xa wayeneminyaka engama-8 ubudala. Uyise wakhe wafa ngoxa wayekhokelela ekuhlaselweni kukaSirayeli. Wayeyinduna yegosa laseJiputa ephakamileyo kunye neentsapho zakhe eGaza.
Xa wafa, wayebhekwa ngokuba ngu "shahid," umfel 'ukholo we jihad. Isikhundla sakhe esasemva kwafumana uNonie kunye nentsapho yakhe indawo ephakamileyo kwiSulumane.
Kodwa iDarwish yavelisa iliso elisoloko libudala. Wayebuza umxholo wakhe wamaSilamsi kunye nokukhuliswa. Waguquka ebuKristwini emva kokuva umshumayeli ongumKristu kumabonakude.
Kwincwadi yakhe yakutshanje, uDarwish uxwayisa malunga nomthetho we-sharia umthetho-oko kukuthi, kuthini ukuba uthetha njani, kwaye ubonakala njani kumazwe aseSilamsi.
KwiNtshona, uthi amaSulumane amakhulu asebenza ukunyanzelisa i-sharia kwihlabathi. Ukuba oko kwenzeka, impucuko yeNtshona iya kubhujiswa. Ngokubanzi ama-Western athatha zonke iinkolo zikhuthaza inhlonipho ngesithunzi somntu ngamnye. Umthetho wamaSulumane (u-Sharia) ufundisa ukuba abangewona amaSulumane kufuneka bahlulwe okanye babulawe kweli hlabathi.
Ukuthula nokuchuma kwabantwana akubalulekanga njengoko kuqinisekisa ukuba umthetho wama-Islam ulawula yonke indawo eMbindi Mpuma kwaye ekugqibeleni kwihlabathi.
Nangona amaWestern athetha ukucinga ukuba zonke iinkolo zikhuthaza uhlobo oluthile lolawulo lwegolide, uSharia ufundisa ezimbini iinkqubo zokuziphatha - enye yamaSulumane kunye nomnye ongengamaSulumane. Ukwakha kwizenzo zentlanga yekhulu lesikhombisa, uSharia ukhuthaza uhlangothi lwesintu olufuna ukuthatha kwaye lubaxhaphaze abanye.
Nangona amaWestern athambekela ukucinga ngokuphathelele abantu abanokwenkolo abaphuhlisa ukuqonda kunye nolwalamano noThixo, abameli baseSharia ababulala abantu ababuza imibuzo enzima engachazwa njengento yokugxekwa.
Kunzima ukucinga, ukuba kule mihla neminyaka, abaphengululi bamaSulumane bavuma ukuba abo bagxeka amaSilamsi okanye bakhetha ukuyeka ukuba ngamaSulumane kufuneka bafezekiswe. Ngokudabukisayo, ngelixa intetho yokuguqulwa kwamaSilamsi iqhelekile kwaye ixutywa ngabaninzi eNtshonalanga, ukukhonona okunjalo eMiddle East kuyacinywa ngenxa yokwesatshiswa.
Nangona ama-Western ajwayele ukwanda kwenyameko yonqulo emva kwexesha, iDarwish ichaza indlela i-petroli yaseburhulumenteni isetyenziselwa ngayo ukukhulisa uhlobo olubi kakhulu lwe-Islam kwilizwe laseYiputa kunye nakwezinye iindawo.
Kwiminyaka engamashumi amabini kuya kubakho abavoti abangamaSulumane okwaneleyo e-US ukuba bakhethe uMongameli ngokwabo!
Ndicinga ukuba wonke umntu wase-US kufuneka afunwe ukuba afunde oku, kodwa nge-ACLU, ayikho indlela eya kusasazeka ngayo, ngaphandle kokuba ngamnye wethu athumela!
Le yithuba lakho lokwenza umehluko ...!
Uhlalutyo: Nangona igalelo eliphezulu ("Uvuyo lwabasetyhini bamaSilamsi ngoNonie Darwish"), le ngxelo ayibhaliwe ngumgqugquzeli wamaLungelo angamaSulumane aguqulwa ngumKristu, uNonie Darwish; Ngokwenene, i-bottom-thirds of bottom of it refer to her in the third person. I-Darwish iqinisekiswe nge-imeyile ukuba ayizange ibhale le nqaku, nangona kunjalo, ngamazwi akhe, "ngokukhulu kunene." Waqhubeka wathi incwadana yakhe ye-2009, i- Cruel and Usual Punishment , ibonakalisa bhetele imibono yakhe.
Kufuneka kuphawulwe ukuba ngelixa i-imeyli ingancinci ngokusekelwe kwimeko yamava kaDarwish akhula kwilizwe lamaSilamsi kwaye efunda i-Qur'an, ibango lakhe lokuba likhulu ngokuchanekileyo lithetha ukuba, nangokwembono yakhe, ayenjalo echanekileyo ngokupheleleyo . Ukuthetha okuncinci, itekisi yinto yokubhaliweyo, ihlaselwa kwi-generalizations, kwaye yenza amabango amakhulu malunga ne-Islam kunye neendlela zobuSulumane ezingabhekiseli kubo bonke amaSulumane.
Ngolunye ulwazi kwiimboniselo zikaNonie Darwish ngamazwi akhe, jonga ukuGweba nokuTyala (Intlanganiso). - FamilySecurityMatters.org, 8 uJanuwari 2009.
Ngombono ohlukileyo ngokholo lwamaSilamsi, funda iingoma nge-Islam nguChristine Huda Dodge - About.com.
Kugcine ukuhlaziywa 06/25/10
URonald Reagan: Ubumnandi noBantu phantsi kweScalpel
Ibali le-Little Teddy Stoddard
Tedd Petruna kunye ne-AirTran Flight 297 ukusuka e-Atlanta ukuya eHouston
I-JFK: "Ndiyi-Jelly Donut" ("Ich Bin ein Berliner")
Ngaba zonke iiSanta zeReinser Women?
Iimpapasho eziPhambili ezingama-25 zeeDolophu
Amazwe aseCaribbean ngeNgingqi
Phrinta ngqo kwiPrinta
IsiFrentshi IsiGama: KwiDentist
Isikhokelo kwiNkcubeko kunye neEcology yeSiqithi sePasika
IYunivesithi yeSouth Carolina i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Imfazwe Yehlabathi II: De Havilland Mosquito
Yintoni eyenza iProboardboarder iP Pro?
Izigidi, iibhiliyoni kunye neeTriliyoni
Ukubiza 'C' no 'Z'
UMarge Piercy, uMvelisi weNkcubekokazi kunye neNdlovukazi
Umnandi uBennie Sanders Memes
Indlela yokudibanisa "Khusela" (ukukhusela) ngesiFrentshi
Ukwakhiwa kwakhona emva kobaloyiko - Ixesha loMfanekiso
'Ukuziqhayisa kunye noCalulo' Ukuhlaziywa
Inqaku lomgca Veto: Kutheni amaMongameli asenako ukwenza
Iimvumi eziMculo eziPhambili ze-2005
Uphando lwezakhiwo - Indlela yokufunda ngeNdlu yakho endala
Inombolo yeSteric Inkcazo kunye nokubala
Ikholeji yeSUNY kwi-Oswego Admissions Facts